TARABA:NDỊ SOJA AGBAGBUOLA NDỊ UWE OJII ATỌ – hoo!haa!!
MA Ị NỌ PDP, MA Ị NỌ APC, IHE ANYỊ NỌ BỤ IMEPE MPAGHARA ANYỊ - EKWEREMADỤ
TARABA:NDỊ SOJA AGBAGBUOLA NDỊ UWE OJII ATỌ
Jalingo: Onye Nlekọta ukwu nke Ndị Uwe Ojii, M.A Adamu enyewo ntụziaka ka e mee nnyocha banyere ndị Uwe ojii atọ nakwa otu onye nkịtị ndị soja gbagburu n’Ibi dị na Taraba Steeti ụbọchị Wenezdee, abalị asaa nke ọnwa Ọgọọst.
Ndị Uwe ojii ahụ nke du ha bụ ASP Felix Adolije nke Ngalaba ọpụrụ iche ndị Uwe ojii ala anyị a na-akpọ “Intelligence Response Team” (IRT) ka ndị soja wakporo n’ike n’ụzọ si Ibi aga Jalingo were gbaa ha egbe ugboro ugboro, n’agbanyeghị na ndị Uwe ojii ahụ mere ka ha ghọta na ha bụ ndị Uwe ojii.
Ndị soja ahụ tọhapụrụ Alhaji Hamisu, Onyeisi ntọrị na-ewu ewu onye ndị uwe ojii ahụ ji eji, ọ were gbalagakwa.
Kaosiladi Ọnụ na-ekwuru ndị Agha Naịjiriya bụ Colonel Sagir Musa, kọwara na e chere na ndị ahụ a gbagburu bụ ndị ntọ tinyere na ha nwụrụ na nkwakọrịta mgbọ
Nsogbu dịkwa n’obodo a. Keduzi ka ndị soja sizi dara ndị uwe ojii nọ n’ọrụ gbagbuo? N’ezie, ihe a bụ ka ndị Uwe ojii si agbagbukwa ndị nkịtị ndị aka ha dị ọcha. Mana, ọ dị mma ịkpọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ n’agbanyeghị onye o metụtara
Previous Post: ENUGWU:ỤGBỌALA MMADỤ ANỌGHỊ EBUTELA ỌGBATA UHIE
Next Post: KA CHI FOO:DSS ENWETALA IKIKE ỊKPỌCHIKWU SOWORE